Manatsara ny sary mailakao amin'ny fisehoana retina | Martech Zone
Satria lasa mahazatra ny ankamaroan'ny fampitaovana avo lenta amin'ny fitaovana rehetra, dia zava-dehibe ny hanararaotan'ireo mpivarotra ny fiatraikany avo lenta. Ny fahazavan'ny sary ampiasaina amin'ny mailaka, ohatra, dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny mpamaky mailaka. Ny famoronana ny sary aman-drakitrao araka ny tokony ho izy ary avy eo handrefesana / hampiakarana azy ireo - mandritra ny fanatsarana ny haben'ny sary - dia mahay mandanjalanja mba hahazoana antoka fa hamboarina amin'ny valiny tsara indrindra ianao sy ny taha-tsindry avy amin'ny mailakao.
Ity infographic avy amin'ny Email Monks, Retina Email - Fanovana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fisehoana avo lenta, manome anao toro-hevitra haingana momba ny famolavolana ny mailaka namana retina, ao an-tsaina ny tahan'ny sary tonga lafatra, ny haben'ny rakitra, ny fangatahana haino aman-jery ho an'ny famolavolana mailaka mamaly sy ireo singa lehibe hafa.
Tags: rivotrafamolavolana mailakainfographic mailakamoanina mailakafampisehoana kalitao avo lentaiPadipad miniiPhonemacbook 3fampisehoana retinamailaka retinavahaolana amin'ny retina
Lahatsoratra Pagemodo: Ampitomboy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo mpijery ara-tsosialy anao